काठमाण्डौंमा अनौठो तरिकाले चोरि गर्ने युवक प क्राउ, उनको चोरि गर्ने सैली देखेर प्रहरी पनि चकित ! – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/काठमाण्डौंमा अनौठो तरिकाले चोरि गर्ने युवक प क्राउ, उनको चोरि गर्ने सैली देखेर प्रहरी पनि चकित !
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा अनौठो प्रकृतिको चोरी गर्ने युवक फेला परेका छन् । उनको चोरीको शैली देखेर प्रहरी पनि चकित परेको छ । नयाँ नयाँ मोटरसाइकलमा युवतीलाई राखेर घुमाउने र रेष्टुरेष्ट लिएर गएर खुवाउने ति युवाको भित्रि खेलका बारेमा थाहा पाएपछि प्रहरी चकित परेको हो । नयाँ मोटरसाइकल चोरी गर्ने, लकडाउनको समयमा सहयोग गर्ने नाममा युवतीलाई लिफ्ट दिने, खाजा नास्ता खाने वहानामा युवतीलाई रेष्टुरेष्टमा समेत लिएर जाने अनि युवती शौचालय गएको मौकामा उसको ब्यागवाट महंगो मोवाइल र पैसा समेत चोरी गर्ने युवक फेला परेका छन् ।
उनको धन्दा यतिमा मात्र सिमित हुँदैन । युवतीहरुवाट चोरेको महंगो मोवाइल सस्तो दरमा बेच्ने । अनि बेचेको केही दिनमा म प्रहरीको डिएसपी हुँ भन्दै फोन गरेर आफैले बेचेको मोवाइल फिर्ता लिने ।nप्रहरीलाई नै चकित पार्ने यस्तो योजनाले चोरी गर्ने युवा हुन् रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका २ घर भई काठमाडौंको चण्डोलमा बस्दै आएका २६ वर्षीय राजकुमार दनुवार । उनलाई महानगरीय प्रहरी वृत महाराजगञ्जले बुधबार विहान चोरीको आरोपमा सामाखुसीबाट पक्राउ गरेको छ ।
उनले पार्किङमा राखेको महँगो मूल्य पर्ने मोटरसाइकल चोरी गर्थे । त्यसपछि उनको एक पछि अर्को योजना सफल बनाउथे । मोटरसाइकलमा युवती घुमाउने र उनै युवतीलाई लुट्ने । गंगबुको एक गेष्ट हाउसअघि पार्किङ्ग गरिराखेको एक बुलेट बाइक चोरी भएको घटनाको अनुसन्धान गर्दै जाँदा यस्तो रहस्य खुलेको हो । उनले यसरी युवतीहरुवाट चोरेका दर्जनौ मोवाइल सस्तोमा बेचेर फेरी प्रहरी हुँ भन्दै फिर्ता लिएका छन् ।उनी विरुद्ध अहिलेसम्म ११ जनाले जाहेरी दिएका छन्। २१ जना युवतीको मोबाइल चोरी गरेको दनुवारले स्वीकार गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
नबिल बैँकका ग्राहकलाई आयो यस्तो सूचना
कतारमा १ सय ७४ नेपालीलाई उद्दार गरिदैं
डिर्भोस पछि एक्लै रमाइरहेका यी नेपाली नायिकाहरु के गर्दै छन् ? आजभोली